2500 TOA: Ndị nna ochie nke ndị Buginese biri na Sulawesi, nke atọ kasị ukwuu na Island Indonesia ugbu a.
1544: Onye ahịa Portuguese bụ Antonio de Paiva dere akwụkwọ ozi si Sulawesi, ụlọ nke bissu, laghachi na Portugal na-akọwa bissu.
1848: Onye njem Europe bụ James Brooke gara Sulawesi wee dekọba ihe ederede banyere bissu na akwụkwọ akụkọ ya.
1960s: A na-egbochi Bissu kpamkpam na ọbịbịa nke nkwenkwe Islam.
1990s-mmalite 2000s: Puang Matoa Saidi jere ozi dị ka onye ndu a ma ama nke bissu.
1990s-2015: Enweela ike ịmaliteghachi bissu ma ọ bụ n'ụzọ kachasị mkpa maka inye ememe maka ndị nkịtị na ụfọdụ na-akwado njem nleta.
2015: Na-enwewanye mkpagbu na ọkwa ndọrọ ndọrọ ọchịchị na iwu dị iche iche na ụdị ụdị nwoke ọ bụla, ụdị mmekọahụ na nke ime mmụọ. Mkpagbu a na-emebisị bissu na usoro nkwenkwe omenala n'ozuzu ya.
Tupu ọbịbịa nke Alakụba, na n'ókè dị nta nke Kraist, ọtụtụ ndị nọ n'Andonesia na-eso ụdị ọdịdị nke okpukpe, nke Hindu na Buddha na-emetụtakarị. Ụdị nke ime mmụọ ha na-esote kwere maka ofufe nke ụmụ anụmanụ, iwu nke ndị ọzọ, na mmepe nke arụsị. Mgbe Islam bịara na 1500, ọtụtụ n'ime ụdị nke animism a wepụrụ; Otú ọ dị, akụkụ ndị ọzọ nke ya na ndị Alakụba nwere mmekọrịta. N'ezie, ọ bụ bissu, nke siri ike ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị Alakụba na-ahụ bissu dị ka mgbochi islam, onye kwenyere ndị ọchịchị South Sulawesi ka ha tọghata Islam. Ya mere, Bissu nọ n'ọnọdụ iji tinye ụfọdụ n'ime nkwenkwe ha tupu oge nke Islam na ndị Islam ọzọ.
Dabere n'otú e si kọwaa echiche nwoke na nwanyi, ọ ga-ekwe omume ikwu na ndị Bugis nabatara ndị ikom ise: makkunrai, oroané, calabai, calalai, na bissu. Ọ bụ ezie na okwu ndị a adịghị emetụta echiche nke Western banyere okike, ọ ga-ekwe omume ịsị na makkunrai bụ ụmụ nwanyị nwanyị, ụmụ nwoke bụ nwoke na nwoke, ụmụ nwanyị bụ ụmụ nwoke, calalai bụ ụmụ nwoke na ụmụ nwoke na nwanyị. Bissu na ajuju otutu oru ndi ozo n'uwa dum nke ndi ndi nwere ike weputa ihe ndi nwanyi na ndi nwoke, dika hijra na India (Nanda 1990) na ndi mmadu abuo na North America (Jacobs, Thomas, Lang 1997) nakwa na mpaghara ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia (Peletz 2006).
Bissu [Foto dị n'aka nri] bụ ntụziaka nke ndị nduzi ime mmụọ na-enye nkwado na enyemaka nye ndị mmadụ nọ n'àgwàetiti Sulawesi na Indonesia. Ọtụtụ ndị kweere na bissu na-enweta ike ime mmụọ ha site n'ịnọkọta ndị inyom na ndị nwoke. Bissu nwere ike inye ndị mmadụ ngọzi na-eme ka ha nwee ezigbo njikọ alụmdi na nwunye, ihe ịga nke ọma na njem nleta na-aga nke ọma, tinyere Mecca maka njem uka Islam.
Ihe mbụ edere n'akụkọ ihe mere eme nke dị na ọrụ na ọnọdụ nke bissu sitere n'aka ndị njem Europe na mpaghara ahụ edekọtara njem ha. Dịka ọmụmaatụ, na 1544 Portuguese ahịa Antonio de Paiva nọrọ oge na Sulawesi, n'ụlọ nke bissu. O degaziri akwụkwọ ozi ọzọ na Portugal, sị:
Lordbụ Onyenwe gị ga-ama na a na-akpọkarị ndị nchụàjà nke ndị eze a bissus. Ha anaghị eto ajị agba na ajị agba ha, na-eyiri uwe elu nke ụmụ nwaanyị, na-etokwa ogologo ntutu ha ma na-akpụ isi; ha na-e imitateomi okwu [ụmụ nwanyị] n'ihi na ha na-anabata omume niile na omume ụmụ nwanyị. Ha luru ma nabata ha, dika omenala nke ala ha, ha na ndi ozo ndi ozo, ha na-ebikwa n'ime ulo, ha na ndi mmadu ha na ndi di ha. Nke a bụ ihe ọmụma ọha na eze, ọ bụghị naanị n'akụkụ ebe a, kama n'ihi otu ọnụ ahụ nke Onyenwe anyị nyere iji kwupụta otuto ya. Ndi nchu aja a, oburu na ha metu nwanyi aka n’uche ma obu n’omume, sie ya na ite nihi na ha kwenyere na okpukpere chi ha nile gha efunwu ma ha mee ya; Ha nwekwara ezé ha kpuchitere na ọla edo. Ma dika m'siri Onye-nwe-gi, ejiri m ezi uche a jee, wee ju m anya na Onyenwe anyị ga-ebibi obodo atọ nke Sọdọm ahụ maka otu mmehie ahụ wee tụlee otu mbibi abịakwasịghị ndị na-akwa iko dịka ndị a ogologo oge na ihe a ga-eme, n'ihi na ala ahụ dum gbara ihe ọjọọ gburugburu. (akpọrọ na Baker 2005: 69)
Afọ ole na ole ka e mesịrị, onye njem Europe, James Brooke, bịara Sulawesi. O dere n'akwụkwọ akụkọ ya banyere bissu na calalai '(etymologically "men's men ụgha") na calabai "(etymologically" ndị inyom ụgha "). Brooke dere, sị:
Omume kachasị njọ m hụrụ bụ, na ụfọdụ ndị uwe na-eyi uwe dịka ụmụ nwanyị, na ụfọdụ ụmụ nwanyị dị ka ụmụ nwoke; ọ bụghị n'oge ụfọdụ, kama na ndụ ha niile, na-etinye onwe ha n'ọrụ na ịchụso mmekọahụ ha. N'ihe banyere ụmụ nwoke, o yiri ka ndị nne na nna nke nwa nwoke, mgbe ha na-aghọta na ọ bụ ụfọdụ ihe arụ nke ọdịdị na ọdịdị, na-eduzi ya iji chee ya n'aka otu n'ime ndị raja, bụ onye ọ natara ya. Ndị ntorobịa a na-enwekarị mmetụta dị ukwuu n'ahụ ndị nwe ha. (Brooke 1848: 82-83)
E nwekwara ihe àmà nke bissu tupu nchọpụta nke Europe ma ọ na-abịakwute anyị na akụkọ oge gara aga (Pelras 1996). Dịka ọmụmaatụ, e nwere ọtụtụ akụkọ si malite na Sulawesi banyere ntọala nke ụwa na otú e si zite bissu site na mbara ala iji hụ na ọganihu nke ụmụ mmadụ nọ n'ụwa.
Anyi nwekwara ihe akaebe nke bissu site na akwukwo nke ndi sages. N'ezie, edere ihe na Sulawesi kemgbe ọ dịkarịa ala narị afọ iri na ise ọ bụrụ na ọ bụghị na mbụ. N'ụzọ dị mwute, ọ bụ ezie na ihe odide kasị ochie a maara na Bugis na-adị ndụ sitere na mmalite 1700s (Noorduyn 1965). Ya mere, enweghị ike ịmara maka ọrụ bissu n'ihu 1500s mgbe de Paiva gara. Ma site na 1700s e nwere ọtụtụ puku ụmụ amaala dị, ọtụtụ n'ime ha na-ekwu banyere ọrụ bissu. Ihe odide ederede na-ekwu na ha na-arụ ọrụ dị mkpa n'ihe gbasara obodo. E nwere ihe odide nke na-edekọ agha dị n'agbata narị afọ nke iri na isii na ebe ndị bissu nyeere Bugis mmeri mmeri dị ukwuu megide Dutch. Ihe omuma ndi ozo banyere agha ebe ndi bissu gara n'iru ndi agha agha, ndi choro iju mmiri. Ka ha na-ejikọta ike nwoke na nwoke. bissu nwere ike ikwurita uka nke uwa iji nweta nchebe n'oge agha. Akwụkwọ edemede na-ekwukwa banyere bissu na-arụ ọrụ dị iche iche n'ọgbọ dị iche iche nke ụlọikpe eze Bugis, na-adụ ọdụ ndị ọchịchị ga - alụ, mgbe ha ga - aga agha na banyere ahịa ahịa ọma (Andaya 2000).
N'ihe banyere 2018, ọnọdụ nke bissu nwere ike ịbụ nke dị njọ karịa n'oge gara aga. N'ezie, bissu nwere ọtụtụ nsogbu na nsogbu ndị a na-atụle n'okpuru ebe a.
Ọ bụ ezie na bissu nọ na-eme ogologo oge tupu Islam abịa Indonesia, ndị bissu nọ na oge a na-eme ka nkwenkwe oge mbụ nke ndị Alakụba na ndị Islam. Na past bissu na ndị ha na ha na-efe ofufe ga-efe ofufe na alters na arụsị kweere na-anọchite anya chi. Islam ekweghị nke a, ya mere bissu anaghịzi eme ụdị omume ahụ. Ọzọkwa, bissu na-ejikwa ya chụọ àjà ndị dị ka anụ ezi (nke bụ nri nri dị n'ihu Islam), ma dịka ndị Alakụba, bissu agbanweela omume ndị a. A ka na-achụrụ ihe oriri, ma ihe oriri niile bụ halal. Ma mgbe ndi mmuo aghachitere ihe di iche iche nke nri ahu, agiri ihe oriri ka ewe ghara ilapu ya, nke agwere dika nmehie n'okpuru Islam. Otu n'ime ihe a na-achọkarị ngọzi maka bissu iji kụziere ya bụ iji gọzie njem nke mmadụ iji mee njem njem ha na Mecca. N'ezie, ọtụtụ bissu bụ hajji, nke pụtara na ha eburu ụzọ gaa njem uka na Mecca.
Otu n'ime ihe ndị bụ isi maka bissu nwere ike inye ngọzi bụ na a na-ahụta ha ka ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke. Nchikota a na-enweghi oke nke nwanyi na nwoke putara na bissu enwewo ike ijigide nmekorita ha na ala mmuo, ihe nkewapuru mgbe ndi mmadu di iche na nwanyi ma obu nwoke. Nkwenye na mmadu di iche na nwoke ma obu nwoke, nwoke na nwanyi na ihe omuma aburuwo ihe ngbagha siri ike banyere esemokwu na mmadu nile kwesiri ibu nwanyi ma obu nwoke.
Bissu nwere nnukwu ọrụ na omenala na okpukpe nke Bugis Indonesian ruo ọtụtụ narị afọ. Ọrụ a adalatala n'ime iri afọ ole na ole gara aga, ma bissu ka na-etolite akụkụ dị mkpa nke Bugis ndụ. Ndị mmadụ na-achọ enyemaka nke bissu maka ọtụtụ ihe kpatara ya, gụnyere ịgọzi ọmụmụ nwa ọhụrụ. A na-arụ ọrụ dị iche iche n'ọtụtụ ụzọ. Ọtụtụ mgbe, ndị na-achọ ngọzi na-aga n'ụlọ bissu nwere ike ịnwe ụlọ pụrụ iche raara nye ngọzi. N'ime ime ụlọ a, ọ nwere ike ịchọta akwa ákwà, ọkwá na efere dị ichiiche, na ọtụtụ ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ. Onye na-achọ ngọzi ga-anọdụ n'ala n'ala n'ihu bissu, maka ngọzi dị mfe, bissu na-ede uri uri, na-esure ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ ma na-achọ onye ahụ nke ọma.
N'ihe n 'otutu ngọzi di iche iche, di ka nke ahu maka ihe ubi na-aga nke oma n'onu obodo dum, bissu nwere ma obu karia. A na-eduzi nnukwu ngọzi ndị ọzọ maka ihe ndị dị ka ememme mmiri, ịkụ ihe ubi na maka alụmdi na nwunye. Ngọzi buru ibu dị otú a nwere ike ịchọ ka bissu gosipụta ike ha inye ngọzi, nke ha na-eme site n'ịme ya ime.
Magiri bụ ememe nke onwe onye na-eme onwe ya ka ọ bụrụ na bissu gosipụtara na ha nwere mmụọ dị ike, ma nwee ike inye ngọzi, site n'ịṅụ mma maọbụ kris ma gbalịa ileba anya na ya. [Foto dị na nri] Bissu na - ejide mma ma na - amanye ya n'ime akụkụ ndị dị nro dịka olu na anya. Ọ bụrụ na agụba adịghị abanye, ọbụna n'okpuru nrụgide dị ukwuu, bissu egosila na ha nwere ike imebi (kebal) ma nwekwa mmuo di ike ma nwekwa ike inye onyinye.
Magiri ihe omume di oke egwu ma nwee ike itinye aka na iri abuo bissu ma na-eme ihe na gburugburu ndi mmadu nile na-acho onwe ha na mmeghari ndi ozo. Ụlọ ahụ jupụtara na ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ na ndị na-egwu egwú nọ ọdụ n'elu ala gburugburu bọmbụ paịndụ na ngwá ndị ọzọ na-eme ka ahụmahụ ahụ ka njọ. Omume a na-aga onye ọ bụla n'ime obodo site na nwata ruo agadi ma nwee ike ịgụta ọtụtụ awa, ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu ime arụ ọrụ bụ ihe na-erughị otu awa. Nkwadebe na-eduga na arụmọrụ na-ewe ụbọchị, ya na obodo ahụ dum na-ekere òkè n'ụzọ dịgasị iche iche site na nkata ịkwanye, iji chọọ ụlọ ahụ iji na-esi nri na-edozi nri maka ma anụ ahụ ma ndị na-eso ya.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime ngọzi ndị a na-emere ndị obodo dị mma, ndị bissu na-esonye n'ememme ndị dị ukwuu maka ndị ọgaranya na ndị a ma ama. Otu ihe omume nke bissu na-emetụta bụ ememme alụmdi na nwunye nke ndị ọgaranya na nke ndị isi. A na-echekwa agbamakwụkwọ dị otú ahụ ọtụtụ afọ n'ọdịnihu ma bissu na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịhụ na agbamakwụkwọ ahụ bụ ihe ịga nke ọma. Bissu nwere ike ijikọta na ụwa mmụọ iji họrọ ụbọchị dị mma maka agbamakwụkwọ ahụ, nke nwere ike ime n'oge ụfọdụ otu izu zuru ezu. Bissu nwere ọkwa dị iche iche ma ma nwoke ma nwanyị ahụ ga - ejikọta ha na ụwa nke mmụọ ma hụ na egwuregwu ahụ ga - abụ ihe ịga nke ọma ma n'ihe gbasara mmekọrịta na fecundity. Bissu na-ekere òkè na mma nke nwanyị a na-alụ ọhụrụ, na-ahazi nlekọta ahụ ya, ntutu isi na ịhọrọ uwe na-ele anya ma mara mma. Bissu ga-akwadebe ihe oriri a ga-eji laa n'iyi mgbe mmụọ ndị ahụ bidochara ya. Bissu ga-agọzi ihe ndina di na nwunye iji hụ na ụmụaka ga-esi n'alụmdi na nwunye ahụ pụta. A na-eme ihe a nile, na okwu ahụ bụ na di na nwunye bụ ndị Alakụba, na ụzọ ndị kwekọrọ na Islam. Ikike nke bissu iji mee ka nkwenkwe ndị na-aga n'ihu na imegharị ma gbanwee ihe ndị a iji kwekọọ na Islam oge a emeela ka bissu bụrụ ihe dị mkpa na ụbọchị a.
Maka ọtụtụ n'ime 1990s na mmalite 2000s, onye ọ bụla a ghọtara bụ onye ndú nke bissu bụ Puang Matoa Saidi. [Foto dị n'aka nri] Puang Matoa bụ Bugis okwu maka onye ndú. Puang Monu Saidi gara na Robert Wilson na ụlọ ọrụ ihe nkiri ya iji kwalite mmepụta nke La Galigo na Asia, Europe na US. La Galigo bụ ihe egwuregwu na-adabere na Bugis si malite na akụkọ ma si otú ahụ bissu na-egwuri egwu .Ma, Puang Matoa Saidi kwụsịrị ịrịa ọrịa n'etiti 2000s. Otutu bissu abanyewo n'oru Puang Matoa kemgbe Saidi na-agafe, ma o nweghi ugbua o nwetara ogo nke Saidi. Enwerekwa akara ogologo nke bissu n'ihu Puang Monu Saidi, ebe ọtụtụ ndị si n'otu mpaghara ahụ dị ka Puang Matu Saidi (Pangkep na Segeri), ndị ọzọ na-esi ísì dị ka Pare-Pare (dịka Puang Matoa Haji Gandaria) nakwa ebe Bone na South Sulawesi.
Ọ bụ ezie na onye ọ bụla nwere ike ịme ka ị nwee ike ịme ka mmadụ nwee ike ịmekọrịta ihe dị mma n'etiti ndị bissu na ndị LGBT dị na Indonesia, nke a emebeghị na nnukwu ọnụ ọgụgụ. A na-ewere usoro LGBT ugbu a dị ka ihe iyi egwu nke nchebe mba na Indonesia, dịka Tweets na-adịbeghị anya site n'aka onye ndụmọdụ nke nchekwa mba na Indonesia. A na - emechi ihe ịrịba ama ọ bụla nke òtù LGBT na - akwado maka ikike iwu na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ngwa ngwa. Mana ihe omume na-eme na Indonesia ebe ọ bụ na 2016 malitere "Nsogbu LGBT" nwere ike ime ka nwoke na nwoke na nwanyị dịgasị iche iche na-arụkọ ọrụ ọnụ n'ịdị n'otu ịmanye ndị Indonesia na ụzọ nke ndidi na enweghị ndidi.
Ntụle ụwa nke e nyere bissu enyerela aka ma gbochie ìgwè ahụ. Site na oru nke ime egwuregwu, akwụkwọ akụkọ na mgbasa ozi mgbasa ozi ndị ọzọ, ndị na-abụghị Sulawesi, na ọbụna n'ógbè ahụ, na-amụbawanye banyere akụkọ ime mmụọ dị egwu nke mpaghara ahụ. Otú ọ dị, nlebara anya a kpalitewokwa mmeghachi omume na-adịghị mma n'etiti akụkụ ụfọdụ nke ọha mmadụ na-ahụ bissu na-eyi egwu ụfọdụ akụkụ ndụ. Karịsịa, ndị na-aghọtaghị ụzọ dị iche iche nke bissu si gbasaa nkwenkwe ha na ndị Alakụba chere na bissu nwere ike imebi Islam na mpaghara ahụ. N'ụzọ dị iche, ọ bụ ezie na ọtụtụ bissu bụ ndị kasị akwado akwado Islam. N'ezie, bissu Haji Gandaria nwere ike ịnya isi na ha ga-aga Mecca na ọ dịghị ihe dị ka okpukpu atọ n'oge ndụ ya.
Ọ bụ ezie na ihe omume ndị dị ka ọgbọ Robert Wilson na-egwu La Galigo wetara bissu ka ha leba anya n'ụwa, ihe omume ụlọ nwere mmetụta nbibi na LGBT na Indonesia, gụnyere bissu. Na 1998, onye isi ochichi Suharto kwusiri akwatu na Indonesia ka ọ na-egosi nyocha nke Indonesia na ochichi onye kwuo uche ya. Ọ bụ ezie na ochichi onye kwuo uche ya mere ka ọtụtụ mba baa uru na Indonesia, gụnyere nhazi nke Human Rights Commission, ọ wetara ọtụtụ nsogbu ndị na-emebi ihe. Otu n'ime ihe ndị a bụ ịrị elu okwu mkparị na enweghị ndidi. N'ezie, n'ógbè Aceị nke Aceh ugbu a nwere iwu na-emebi nwoke idina nwoke; Ọzọkwa, ngosipụta ọ bụla nke di iche iche di iche iche di iche iche ma obu nke ndi di iche iche ime mmuo di uku.
Ọ bụ ezie na n'okpuru ndụ Suharto adịghị mfe maka ndị LGBT Indonesian, gụnyere bissu, ọ bụ obere oge ka ịkpọasị ịkpọasị dị. N'okpuru ochichi onye kwuo uche, Otú ọ dị, extremism nke ziri ezi, na-esite na Islamist anya, ahụwo ịrị elu megide ndị LGBT Indonesian. N'ezie, ugbu a na-akpali ndị agadi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na iwu na-emejọ ụdị nile nke mmekọahụ tupu alụmdi na nwunye di na nwunye. Ọzọkwa, ndị na-abụghị ndị normative na-enwe nrụgide na-arịwanye elu iji kwekọọ n'ụdị njedebe nke onwe. N'ihi ya, o doro anya na ọdịnihu dị ka bissu. A pụghị ịtụ anya na Indonesia na-amata ọdịnala dị ịtụnanya nke okike dị otú ahụ na ụdị di iche iche nke mmekọahụ, na ọrụ ime mmụọ na nke dị mkpa nke bissu na-arụ n'ime obodo ruo ọtụtụ narị afọ nakwa na a ga-asọpụrụ isi okwu ha na-adịghị asọpụrụ.
Image #1: Foto nke ìgwè bissu.
Foto #2: Foto nke a bissu na-eme ime ememe.
Image #3: Foto nke Puang Monu Saidi.
** Ọ gwụla ma ọ bụghị nke ọzọ, profaịlụ a na-adọta na ọrụ m e depụtara na ndepụta ndepụta.
Andaya, Leonard. 2000. "Ahụ Bissu: Ọmụmụ banyere nwoke na nwanyị nke atọ na Indonesia." Pp. 27-46 n'ime Pasti ndị ọzọ: Women, Gender, and History in Early Modern Southeast Asia, dezie site Barbaraatson Andaya. Honolulu: Centerlọ Ọrụ Maka Ọmụmụ Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Mahadum nke Hawai'i.
Onye Ike, Brett. 2005. "South Sulawesi na 1544: Akwụkwọ Ozi Portuguese." Nyocha nke Indonesian na Malaysian Affairs 39: 61-85.
Davies, Sharyn Graham. 2016. "Indonesia mgbochi Anti-LGBT ụjọ." Ọgbakọ East Asia 8: 8-11.
Davies, Sharyn Graham. 2015a. "Srụ Onwe Gị: Trope nke Eziokwu na Ntọala nke Robert Wilson nke A La Galigo." Akwụkwọ edemede nke Asia Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia 46: 417-43.
Davies, Sharyn Graham. 2015b. “Nyochaa Mmekọahụ.” Pp. 10-31 n'ime Mmekọahụ na Mmekọahụ na Contemporary Indonesia: Mmekọahụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, Ahụike, Di iche iche na Nnọchiteanya, edeziri site n'aka Linda Rae Bennett na Sharyn Graham Davies. London: Routledge.
Davies, Sharyn Graham. 2011. Di iche di iche iche di na Indonesia: Mmekorita, Islam, na Queer Selves. London: RoutledgeCurzon.
Jacobs, Sue-Ellen, Wesley Thomas, na Sabine Lang. 1997. Ndị mmụọ nsọ abụọ: Nwaazụ Amamihe nke nwoke na nwanyị, nke nwoke na nwanyi, na nke ime mmụọ. Chicago: Mahadum nke Illinois Press.
Matthes, BF 1872. "N'ime de Bissoe nke Heidensche Priesters en Priesteressen der \_ Boeginezen." Gbasara anyị na ngalaba aha nwere ike ime, Na-ede Ozi 17: 1-50.
Nanda, Serena 1990. Ma nwoke ma nwanyi: Hijras nke India. Belmont: Ụlọ ọrụ na-ekwusara Wadsworth.
Noorduyn, J. 1965. “Origins nke South Celebes Historical Writing.” Pp. 137-55 na An Okwu Mmalite nke akụkọ ihe mere eme nke Indonesian, nke Soedjatmoko dezie. Obodo: Cornell University Press.
Peletz, Michael G. 2006. "Transgenderism na Gender Pluralism na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia kemgbe Oge Oge A." Usoro ihe omumu nke oge a 47: 309-40.
Pelras, Christian. 1996. Bugis. Oxford: Blackwell Publishers.